Olee otú iji naghachi-ehichapụ foto site na gị iPhone | Esi m mac
Egburu | | Nkuzi
N'ihi iPhone anyị, ụbọchị ọ bụla anyị na-ewere ọtụtụ foto na nseta ihuenyo, nke mere na mgbe anyị mere nyocha reel anyị na-ehichapụ ụyọkọ ọzọ, yana mgbe anyị mere nke a, ọ ga-ekwe omume na n'amaghị ama, anyị na-ehichapụkwa ụfọdụ foto anyị achọghị n'ezie ihichapụ. Ọ dabara nke ọma, mgbe anyị na-ehichapụ foto, anaghị ehichapụ ha ozugbo, mana a na-edebe ha na nchekwa a na-akpọ "ndenye ọgbara ọhụrụ" ruo ụbọchị iri atọ, yabụ ọ bụrụ na tupu oge ahụ agwụchaa ị ghọtara na ihichapụ foto na-achọghị, ịnwere ike ịnweta ya azu. Taa anyị na-agwa gị otu esi eme ya.
Naghachi-ehichapụ foto na vidiyo
Dị ka ị pụrụ iche n'echiche, iji weghachite foto ehichapụ site na iPhone ma ọ bụ iPad gị, ihe mbụ ị ga-eme bụ imeghe ngwa ahụ Foto ma gaa na ngalaba Albums i gha ahu n’elu ala n’aka nri. Na-esote, chọta album "Ehichapụ n'oge na-adịbeghị anya" wee pịa ya. Yabụ, ị ga - enweta foto na vidiyo niile ihichapụrụ n’ime ụbọchị iri atọ gara aga. Pịa "Họrọ" na akuku aka nri elu.
Ugbu a họrọ foto na ị chọrọ iji naghachi. Ọ bụrụ na ọ bụ ọtụtụ consecutive oyiyi na / ma ọ bụ vidiyo, i nwere ike na-mkpịsị aka gị na nke mbụ na ịdọrọ ruo mgbe onye ikpeazụ iji họrọ ha ọtụtụ ihe ngwa ngwa.
Wee pịa "Naghachi" na akụkụ aka nri ala ma kwenye na menu ga-egosi na ihuenyo.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ, ịnwekwara ike iweghachite foto niile. Iji mee nke a, ahọrọla nke ọ bụla, ị ga - ahụ na n'akụkụ aka nri ala ọ na - ekwu "Naghachi ihe niile": pịa ma kwenye.
Foto ndị a ga-alaghachi n’azụ dị ka ihe ọ bụla mere 😀.
Site n'ụzọ, ị nụbeghị ihe omume Apple Talkings, Applelised Podcast?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Nkuzi » Olee otú iji naghachi-ehichapụ foto gị iPhone
Apple kọwara otú mgbasa ozi ga-esi rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ App Store